विद्युत् प्राधिकरणले भित्र्यायो नयाँ प्रविधिः ग्राहकको घरमा नगई मिटर रिडिङ ! - Jhapa Online
विद्युत् प्राधिकरणले भित्र्यायो नयाँ प्रविधिः ग्राहकको घरमा नगई मिटर रिडिङ !
उहाँका अनुसार पहिलो पटक त्यस्तो प्रविधि जडानमा औद्योगिक ग्राहकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसपछि घरेलु ग्राहकमा उक्त प्रविधि पु¥याइनेछ । सो प्रविधिको प्रयोग पछि विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न र चोरी नियन्त्रण गर्न सहयोगी हुनेछ । यस्तै सो वितरण केन्द्रले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका ग्राहकको लाइन काटेर ९२ लाख बक्यौता उठाएको छ ।